China Flour Blending Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Kutanga, mhando dzakasiyana uye mamakisi akasiyana eupfu anogadzirwa mukamuri yekugaya anotumirwa kumabhini ekuchengetera akasiyana kuburikidza nekuendesa michina yekuchengetedza.
Kutanga, mhando dzakasiyana uye mamakisi akasiyana eupfu anogadzirwa mukamuri yekugaya anotumirwa kumabhini ekuchengetera akasiyana kuburikidza nekuendesa michina yekuchengetedza. Hupfu uhwu hunonzi hupfu hwekutanga. Hupfu hwepamberi husati hwapinda mudura, inofanirwa kupfuura nenzira dzehupfu kuongorora, metering, kupatsanura kwemagineti, uye mishonga yekuuraya zvipembenene. Kana kusanganisa hupfu kuchidikanwa, hupfu hwekutanga hwemhando dzinoverengeka dzinoda kuenzaniswa hunoburitswa kubva mubhini, hwakasanganiswa pamwechete zvichienderana nechimwe chikamu, uye zvinowedzerwa zvakasiyana zvinowedzerwa pazvinenge zvichidikanwa, uye hupfu hwakapedzwa hunoumbwa mushure mekumedza nekusanganisa. Zvichienderana nekusiyana kwemhando dzakasiyana dzeupfu hwekutanga, zviyero zvakasiyana zveupfu hwakasiyana, uye zvinowedzerwa zvakasiyana, mamakisi akasiyana kana mhando dzakasiyana dzehupfu hwakakosha dzinogona kusanganiswa uye kuzivikanwa.
Hupfu Blending michina
Chakanaka Pressure Airlock
Mbiri Nzira Valve
Yakaderera Pressure Jet Sefa
Tubular sikuruu conveyor
Hupfu Batch Scale
Kushanda kweFour Blending (chikafu chakadzika kugadzira indasitiri)
Iyi sisitimu inosanganisira iyo pneumatic irikupa uye kuchengetedza yeupfu hwakawanda, ton poda uye diki package yeupfu. Inotora PLC + yekubata skrini kuona otomatiki uremu uye upfu kugovera, uye mvura kana girizi inogona kuwedzerwa maererano, izvo zvinoderedza basa uye kudzivirira kusvibiswa kweguruva.
Hupfu Blending Makesi
Iyo Flour Blending semusangano weupfu weguyo inosanganisa hupfu mumabhini akasiyana eupfu muchiyero kuverengera kugadzikana kwechigadzirwa chekupedzisira.
Iyo Flour Blending semusangano weupfu weguyo inosanganisa mhando dzakasiyana dzehupfu muchiyero chekugadzira mhando dzakasiyana dzehupfu hunoshanda, senge dumpling furawa, sosi yeupfu, uye hupfu hwebundu.
Iyo yekugadzira musangano weiyo noodle fekitori inotora yese-isina simbi simbi yeupfu bhini uye batching chikero. Iyo furawa iri muhombe yehupfu bhaini inoendeswa pneumatically kune iyo batching sikero yeiyo chaiyo kuyerwa, iyo inochengetedza maitiro ebhuku rekuburitsa uye inodzivirira mamiriro ezvinhu ekuti vashandi vanowedzera zvakashata huwandu hweupfu.
Mune iyo Flour Blending semusangano weiyo noodle fekitori, zvinoverengeka zvinongedzo zvinowedzerwa zvakaenzana kuupfu kuburitsa akasiyana marudzi eanyosi.
Iyo Flour Blending workshop yefekitori fekitori inowedzera zvinoverengeka zvigadzirwa kuupfu zvakawandisa. Iyo inogadzirwa nesimbi isina tsvina uye chikafu-giredhi anti-ngura.
Mumusangano wekugadzira wefekitori remabhisikiti, hupfu hwaipinda mumusanganiswa wehupfu wekusanganisa mushure mekuyerwa uye kusanganiswa.
Zvadaro: MLT Series Degerminator